LYD Girazi Imwe Stop Solution Kune Ese eGirazi uye Mirror Inoda
Professional akaigadzira mapurani girazi kuchamhembe China
Qinhuangdao LianYiDing Glass Co, Ltd.iri muguta rakanaka remahombekombe eQinhuangdao. Zviri pedyo Qinhuangdao Port uye Tianjin Port pamwe nyore chokufambisa uye chakanakisisa nenzvimbo chinzvimbo.
Mushure memakore angangoita makumi maviri ekuvandudza, isu tine nyika-inotungamira seti yekugadzirisa michina, indasitiri-inotungamira tekinoroji timu uye yemazuva ano manejimendi mazano. Isu parizvino tine 2 otomatiki Insulated Girazi yekugadzira mitsara, 2 Yakadzora girazi yekugadzira mitsara, 4 otomatiki Laminated Girazi yekugadzira mutsara, 2 Sirivha Mirror Girazi yekugadzira mitsara, 2 Aluminium Mirror Girazi yekugadzira mitsara, 1 Screen Kudhinda Girazi yekugadzira mutsara, 1 Low-e Girazi kugadzirwa. mutsara, 8 seti yemidziyo yekucheka michina, 4 mvura jet yekucheka michina, 2 otomatiki ekuchera michina, 1 otomatiki chamfering yekugadzira mitsara uye 1set Heat Yakanyorova Girazi yekugadzira mitsara.
Gadzira huwandu hunosanganisira: Girazi rakatsetseka (3mm-25mm), girazi rakamonerwa rakadzikama, Girazi rakaminama (6.38mm-80mm), Inodzivirira girazi, Aluminium Mirror, Girazi reSirivheri, girazi risina Mhangura, Girazi Rakapisa Rakanyorova (4mm-19mm), Yakapwanyika Girazi, Acid yakamira girazi, Screen yekudhinda girazi, Furniture girazi.
Kubva pamisimboti ye "Kutendeseka uye Kutendeseka, Yakanakisa Hunhu uye Sevhisi Chikuru", Tinogona kugutsa vatengi vese kudiwa kwemarudzi ese ekugadzirwa kwegirazi uye zvigadzirwa zvedu zvatove kuburikidza neEC-EN 12150 Standard muEurope, Iyo INOGONA CGSB 12.1-M90 Standard muCanada, Iyo ANSI Z97.1 uye 16 CFR 1201 Standard muUnited States.
Corporate Tsika & CorporateVision
Kubva pamisimboti ye "kugadzirwa kwemhando yepamusoro, yakanaka yekutarisira manejimendi" uye iyo tenet ye "vanoshandira nemoyo wese vatengi uye nekugadzira kukosha kwebhizinesi", zviitiko zvebhizimusi mumusika zvinogara zvichiisa zvido zvevatengi pakutanga, uye isa chikwereti pakutanga. Kuti titange kuzvidzora-chimiro chekambani, tichaita nhamburiko dzisingaperi dzekugadzira mweya unoshingaira uye unoshamisa webhizinesi, teerera kune zvakadzama, uye edza kunatsiridza chiono chechigadzirwa nekuvimbika, kushuva, uye pfungwa yakakwana yebasa. Kuburikidza nekuedza kwedu, nhanho nhanho, zvishoma nezvishoma kugadzira musika, zvigadzirwa zvakatengeswa kune anopfuura makumi maviri nyika. Isu tinoomerera pakurarama pahunhu, kuvandudza pazvinhu zvitsva, uye nekukupa imwe-yekumira girazi mhinduro.
Isu tinoomerera pakupa yakakosha sevhisi yebasa uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kushandira mutengi wese. Welcome vatengi kushanyira uye kutaurirana!